Kungani i-ExactTarget ne-CoTweet Yenza Ingqondo | Martech Zone
Kungani i-ExactTarget ne-CoTweet Yenza Ingqondo
NgoLwesithathu, ngoMashi 3, 2010 NgoMgqibelo, Novemba 28, 2015 Douglas Karr
Ngiqale ngashaqeka yilezi zindaba, I-ExactTarget ne-CoTweet? I-imeyili ne-Twitter? Babebukeka njengabazala abakude kimi, angizange ngiyithole kahle.
Namuhla ebusuku ngikhulume noChris Baggott, ongumsunguli we I-ExactTarget futhi manje i-CEO ye I-Blogware yokuhlanganisa. UChris akakwazanga ukusho izinto ezanele ngokwenzeka, wayejabule kakhulu ngoScott Dorsey… futhi wachaza nokuthi kunengqondo kanjani ngempela:
I-imeyili ne-Twitter akufani. Zombili izindlela zokuxhumana zokukhetha ukungena nezesitayela.
ICoTweet uhlelo lokuphathwa kwamabhizinisi lwe-Twitter, i-ExactTarget iyinkundla yezentengiso ye-imeyili yebhizinisi. Amabhizinisi akhangwe yilowo nalowo amathemba omunye komunye.
CoTweet kanye ne- Ilebhu Yezokuxhumana Komphakathi ahlinzeke ngoSiliukolweni Inkampani yase-Valley enokubonakala kweSilicon Valley.
ICoTweet ivumela i-ExactTarget ukuthi ingene kwi-Social Media ngaphandle kwengozi enkulu noma izindleko zokuthenga enye yezinhlelo zokusebenza zenhlalo laphaya.
Kuyindlela enhle yokuthi i-ExactTarget ifake izinzwane zayo ezinkundleni zokuxhumana. Abanye bangaphikisa ukuthi i-imeyili ibiyindlela yokuqala yokuxhumana ... Angikwazi ukuphikisana nalokho. Ngibheke phambili ekuboneni okwenzekayo ngokulandelayo nge-ExactTarget futhi ngijabule mathupha ngokuthi iCoTweet manje isinezimpande e-Indianapolis! Ngijabule futhi ukuthi ngeke iphinde ichazwe kabusha i-ExactTweet! 🙂
Ngijabule futhi ngoScott Dorsey! UScott engangixoxisana naye e-ExactTarget emuva ezinsukwini zokuqala - futhi akazange alahlekelwe yintshisekelo, umdlandla nenjabulo yakhe ngenkampani. Akungabazeki ukuthi lesi isahluko sokuqala kokuningi okuzayo! Siyakuhalalisela i-ExactTarget ne-CoTweet!
Tags: cotweetngqoscott dorsey
Mar 4, 2010 ku-11: 40 AM
Ukuhlaziywa okuthakazelisayo, uDoug. Ubona kanjani ukuthi i-ET yenza imali ngeCoTweet?
Mar 4, 2010 ku-6: 38 PM
Imboni ye-imeyili, njengoba uyazi, inayo kushintshe kancane eminyakeni embalwa edlule. Nina bantu ningabanye babambalwa abaye babona ukuthi abathengisi abafuni ukufaka enye insizakalo - bafuna ukunciphisa izinsizakalo zabo nokwenza lula amasu abo. Siqhubeka siphonsa iziteshi ezintsha kubo - futhi lokhu kudinga ukuzenzekelayo okuningi, namathuluzi alula.
Angicabangi ukuthi kuningi mayelana nokwenza i-ExactTarget imali eningi kunokuvikela imali abayenzayo njengamanje. Kukhona ithuba lokuzenzakalela nokwakha amadeshibhodi wokuxhumana wabakhangisi ukusingatha konke ukuphuma, ukuxhumana okusekelwe kwimvume. Uma i-ExactTarget ingaguquki, ngeke igcine ukukhula. Lesi isinyathelo lapho.
Mar 9, 2010 ku-8: 42 AM
Ngiyavuma. Siphinde sabiza ngokukhululekile umphakathi wezobuchwepheshe lapha "iSilicon Prairie." 🙂
Ukutholwa kweCoTweet kujabulisa kakhulu futhi uma ubuchwepheshe buhlangene, sizobona okuthile okungekho omunye umuntu angakunikeza ngokuya ngokuxhumana okusebenzisana.